Ngaphambi kokuhweba ngesonto ngomgqibelo - Kokuhweba ngaphambi
Ngesonto eledlule iOK Mata iqophe umlando ngesikhathi idla umhlanganiso wesicoco seligi imidlalo yesizini esikuyona ingaka qedwa. Ngaphambi kokuba kokwenza noma yikuphi ukunikezelana okungase kuhlanganise izwe elingavunyelwe noma elivimbelwe, xhumana Nomnyango Womthetho ukuthola usizo ngokushesha.
Le ngozi yaseMandeni yenzeke ngoMgqibelo. USAKHUNGATHEKILE umndeni wowesifazane waseDepho, Taylors Halt, eMgungundlovu, okusolakala ukuthi udutshulwe wabulawa wumkhwenyana wakhe maqede wabhekisa isibhamu ngakuyena wazingqokloza wafa ujuqu ngeSonto.
ELimpopo - Owesilisa waseLimpopo usesibhedlela ngemuva kwesigameko lapho adlwengulwe khona ngabesimame ababili bemkhombe ngesibhamu, kusho amaphoyisa ngeSonto. Uqhuba athi wathenga indawo wayenza yalungela umdlalo wezimoto. Ngaphambi kwemidlalo emikhulu, kuzodlala izikole ezine iSunningdale High, iNtabantuzuma, iGcwalulwazi neGawuzi. Ukuze I- Mata ithathe isicoco seligi sesizini ka/ 18 badlalisa okoshampeni bempela ngesikhathi bedlala ngokulingana me Legends ngo 1- 1 kusasele umdlalo owodwa kuphothulwe isizini.
Iqembu lizodlala imidlalo embili yokuqeqesha ne- Sri Lanka XI ozoqala ngoMgqibelo, njengoba amalungiselelo ezangamandla ngaphambi komdlalo wokuqala ngesonto elizayo. Konke lokhu sakwenza ngoLwesihlanu ntambama, bese ngoMgqibelo, omakhelwa beza emcimbini, konke ukudla kwadliwa ngoMgqibelo.
Basuka eKapa, Swazini, Goli, Mpumalanga nakulesi sifundazwe. Bafika ngoLwesihlanu bakhempe, ngoMgqibelo kudlalwe izimoto, ” kucacisa uMabaso.
Ngaphambi kokuthunisa impepho, sathandaza kuNkulunkulu, sicela ukuthi yonke into ihambe kahle, sikwenza lokhu kanye nesangoma. Kuwo uN2 ngaseMandeni kushone owesifazane oneminyaka engu- 34 ngesikhathi imoto abephambana nayo iphaphalaza yashayisa eyakhe.
U- Buthelezi kulindeleke ukuthi angene umuzi nomuzi emalokishini ngenhloso yokunxenxa abavoti ngaphambi kokwethulwa. Kuzodlan’ insimbi kwi Edendale Football Association kulempelasonto njengoba amaqembu ezotholana phezulu kulempelasonto eWadley Stadium.
“ Zaziyisithupha izimoto ngesikhathi siqala kodwa namuhla sezingaphezulu kuka- 20, abantu abawuthamelayo sebengaphezulu kuka- 5000. Izoqala ngokwemuliswa indodakazi kaMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma ngaphambi kokuba ziwushaye njengoba izoshada ngoMgqibelo wePhasika.
Kuzoshunqa uthuli impela zishiyelana inkundla kunandiswa ngebhola likanobhutshuzwayo. Ngaphambi kokuhweba ngesonto ngomgqibelo.
UMengameli we- Inkatha Freedom Party ( IFP), uMntwana Mangosuthu Buthelezi, uzohambela emalokishini ahlukene ezindaweni ezakhele iTheku njengoba leli qembu liqhuba umkhankaso walo wokhetho lohumeni basekhaya oluzobe lumhla zintathu ku- August. “ Noma isiphi isimo sakwi- sub- continent liletha.
AmaSabatha aseTonga agcina iSabatha lawo ngeSonto, ngoba athi ngokwenza kanjalo agcina iSabatha ngesikhathi esifanayo namanye amaSabatha aseSamoa, eqhele ngamakhilomitha. UNgqongqoshe WezeMfundo uPeggy Nkonyeni kulindeleke ayithamele le midlalo aphinde athule inkulumo egqguqguzela ukuzibandakanya kwentsha nezemidlalo.
“ Kuzohluka, ” kusho u- Markram. Ngakho, uma umuntu waseFiji egcina iSabatha ngoMgqibelo, abantu asonta nabo eSamoa, eqhele nje ngamakhilomitha angu- 1 145, basuke besebenza ngoba kubo kusuke kunguLwesihlanu.
Kulimale abathathu kule ngozi. NgeSonto kuM13 ngaseMgungundlovu, ngaphambi kokuba ufike eHillcrest, kushone owesifazane engozini yemoto.
The Greatest Redemption: ikakhulu ukugubha Easter wobu- Orthodox Ingokomoya spirituality bekulokhu bokuthi abantu bethu bhá, wamnika of ongaqondakali lesiSlavonia ukujula.
Umthelela wentela wokufaka izinketho zezitoko
Phuma ukuthi iyiphi into ejwayelekile